ရာသီသွေးဆုံးချိန် အကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ - Hello Sayarwon
အမျိုးသမီးတွေအားလုံး အပျိုဖော်ဝင်ချိန်ကစလို့ ရာသီသွေးဆုံးချိန် ဆိုတာ ကြုံတွေ့ကြရမှာပါ။ တစ်နှစ်တိတိ ရာသီသွေးလာခြင်းမရှိတော့ရင် ရာသီကုန်သွေးကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့အသက်အရွယ်က တူလေ့မရှိပေမယ့် ၄၀ ကျော်နဲ့ ၅၀ ကျော်အရွယ်တွေမှာတော့ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေကပါ သိထားသင့်ပါတယ်။
ရာသီဆုံးချိန်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ oestrogen နဲ့ progesterone လို့ခေါ်တဲ့ မ ဟော်မုန်းတွေကို သားဥအိမ်က ထုတ်နိုင်စွမ်းကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်းတွေ နည်းပါးလာတဲ့အတွက် hot flash လို့ခေါ်တဲ့ ချွေးစေးပြန်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းနဲ့ မိန်းမကိုယ်ခြောက်သွေ့ယားယံလာခြင်းတို့ ဖြစ်စေပါတယ်။ မအင်္ဂါကိုလည်း ကျုံ့လာစေတဲ့အတွက် ပိုပြီးခြောက်သွေ့စေတဲ့အပြင် မအင်္ဂါတစ်ဝိုက်တစ်ရှူးတွေလည်း ရောင်ရမ်းလာစေတာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ မသက်မသာ ဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။
အရိုးပွရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း သွေးဆုံးချိန်မှာ မြင့်တက်လာပါတယ်၊ ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိတဲ့အတွက် သွေးဆုံးချိန်တွေကို ဆေးဝါးတွေကူပြီး ဖြတ်သန်းရတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှာမဟုတ် ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ရိုက်ကိုယ့်ရဲ့ ရောဂါအကြောင်းကို ပြောဆိုဆွေးနွေးတာကလည်းကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ရာသီသွေးဆုံးချိန် အတွက် အားလုံးသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ ..
၁ – ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ ရာသီသွေးဆုံးမှာပါလဲ ?
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ တူလေ့မရှိကြပါဘူး ဒါပေမယ့် ပျမ်းမျှအသက်အရွယ်ကတော့ ၅၁ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်၊ အများစုကတော့ ၄၅ နှစ်ကနေ ၅၅ နှစ်အတွင်း သွေးဆုံးလေ့ရှိတာကတော့ သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ တချို့ကတော့ ဒီ့ထက်တောင်နောက်ကျမှ သွေးဆုံးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
သွေးဆုံးချိန်ဟာ မွေးကတည်းက မျိုးဗီဇအရ ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းလို့အရာမျိုးတွေက ရာသီသွေးစာစောဆုံးတာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။
၂ – ရာသီသွေးမဆုံးခင်အချိန်နဲ့ ဆုံးပြီးချိန်မှာ ဘာတွေကွာခြားသွားသလဲ ?
ရာသီသွေးမဆုံးခင်အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးဆုံးဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ စတင်ပါတော့တယ်။ သားဥအိမ်က ဟော်မုန်းဓာတ်တွေထုတ်လွှတ်နှုန်းက သိသိသာသာပဲကျဆင်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သွေးဆုံးချိန်မှာလိုပဲ ချွေးစေးထွက်တာတွေခံစားလာရသလို ရာသီသွေးလာချိန် မမှန်တော့တာတွေလည်း ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမလာတော့ဘဲ ရပ်သွားတာမျိုးကတော့ ဖြစ်လာဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။
၃ – Estrogen ( အီစထရိုဂျင် ) ဟော်မုန်းကျသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ?
Estrogen ဆိုတာကတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖွံဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဓိကဟော်မုန်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးဆုံးချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင် estrogen ထုတ်လွှတ်မှုနှုန်းကကျဆင်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ၇၅ရာခိုင်နှုန်းသော မိန်းမတွေဟာ သွေးဆုံးချိန်မှာ အများဆုံးကြုံတွေရရတတ်တဲ့ ပြဿနာအဖြစ် hot flash လို့ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက်ကိုယ်ပူချိန်မြင့်တက်လာပြီး ချွေးစေးထွက်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်၊ နေ့ရောညမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့အပြင် တချို့တွေမှာ အဆစ်အမြစ်တွေ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်တဲ့ အဆစ်ရောင်ရောဂါနဲ့ စိတ်ခံစားချက်အလွန်အကြူးအပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်းတို့ကိုပါ ခံစားကြရပါတယ်။
၄ – Hot flash ရနေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရမလဲ ?
Hot flash (အပူပြန်ခြင်း) ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ပူလာတာကိုခံစားရမှာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းပူလာပြီး အရေပြားနီရဲလာတာ အကွက်ထလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအပူချိန်ရုတ်တရက်တက်လာတဲ့အတွက် ချွေးစေးတွေထွက်လာတာတွေ နှလုံးခုန်မြန်လာတာတွေ ခေါင်းမူးလာတာတွေကို ခံစားရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ hot flash ရပ်သွားတာနဲ့အေးလာတာကိုခံစားရမှာပါ။
တစ်နေ့ကို ၁ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ကြိမ်ဖန်များစွာခံစားရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ကနှစ်နဲ့ချီပြီး မပျောက်တာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်။ Hot flash ဖြစ်လာစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့
– အယ်လ်ကိုဟော ဒါမှမဟုတ် ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့အရည်တွေ
– ပူလွန်းတဲ့နေရာမှာ နေနေတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းကလည်း hot flash ဖြစ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေမှာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် များခြင်းနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကလည်း ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် hot flash ကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့
– လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အဝတ်တွေဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ပန်ကာ လေအေးပေးစက်များ တပ်ဆင်ခြင်း။
– hot flash ရနေစဉ် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကလည်း သက်သာစေမှာပါ။
– အခြားဆေးဝါးတွေဖြစ်တဲ့ တားဆေးနဲ့ အလားတူဆေးတွေ၊ ဟော်မုန်းဆေးဝါး ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်းကြားတဲ့ဆေးတွေကလည်း သက်သာဖို့အထောက်အကူပြုမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ မသက်သာလာဘူး ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြီးနောက်ထပ်ကုသမှုခံယူဖို့လိုပါမယ်။
၅ – သွေးဆုံးခြင်းက အရိုးကျန်းမာရေးအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုထိရောက်မှုရှိပါသလဲ ?
သွေးဆုံးပြီးနောက် oestrogen ထုတ်လှုပ်မှုကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာ အရိုးတွင်း ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏကိုလည်း ကျဆင်းလာစေပါတဲ့အတွက် အရိုးရဲ့သိပ်သည်းဆကလည်း သိသိသာသာပဲ လျော့ကျလာမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် အရိုးပွရောဂါကိုဖြစ်ပွားဖို့ ရာခိုင်နူန်းတိုးတက်စေပါတယ်။ တင်ပါးဆုံရိုး၊ ခါးရိုး နဲ့အခြားသောအရိုးနေရာ အရိုးကျိုးဖို့ရာခိုင်နုန်းကလည်းပုံမှန်ထက်ပိုမြင့်တက်နေမှာပါ။
– ကယ်လဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက်တွေကို စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
– လိုအပ်ရင် ဗီတာမင် D အားဆေးတွေသောက်သုံးပေးပါ။
– လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းပါ။
၆ – ရာသီသွေးဆုံးချိန်နဲ့ နှလုံးရောဂါဆက်စပ်မှုရှိပါသလား
သွေးဆုံးချိန်မှာ နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေပိုများပါတယ်။ ဥပမာ နှလုံးတုန်တာ၊ မူးဝေတာမျိုးတွေပေါ့။ Estrogen level ကျသွားတဲ့အတွက် သွေးလွှတ်ကြောတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတချို့ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အစားအစာမျှတစွာစားသုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း နဲ့ ဆေးလိပ်ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့ကလည်း နှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်တာကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
၇ – ရာသီသွေးဆုံးချိန် မှာ ကိုယ်အလေးချိန်တွေရော တက်လာမှာလား ?
သွေးဆုံးချိန်မှာ ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်းတွေအပြောင်းအလဲရှိတာက ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာတာကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်တက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုရပါမယ်။
အဓိကအားဖြင့်တော့ balance diet လို့ခေါ်တဲ့ အစာကို မျှတစွာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အခြားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလေ့ကျင့်ကောင်းများ မွေးမြူခြင်းတို့ကလည်း ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရာမှာ အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာပြီဆိုရင်တော့ နှလုံးရောဂါနဲ့ဆီးချိုရောဂါအပါအဝင် အခြားရောဂါတွေကိုဖြစ်ပွားစေဖို့ အခွင့်အရေးတွေတိုးလာစေပါတယ်။
၈ – သွေးဆုံးချိန်မှာ ကိုယ့်အမေ၊ အစ်မနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေတွေမှာဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေအတိုင်းပဲ ကြုံတွေရမှာလား ?
မိသားစုဝင်တွေထဲမှာတောင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ သားဥအိမ်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကျဆင်းမှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အများကြီးကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် နည်းလမ်းနဲ့ ကိုယ်ဖြေရှင်းရပါမယ်၊ အမေအတွက်မိတ်ဆွေအတွက် တချို့နည်းလမ်းက ကောင်းပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ အသုံးဝင်ချင်မှဝင်မှာပါ။
၉ – သားအိမ်ထုတ်ထားတဲ့သူတွေမှာ သွေးဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ?
တကယ်လို့ သားအိမ်ကို ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ထားရတယ်ဆိုရင်တော့ hot flashes မရမခြင်း သွေးဆုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုတာ သိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရာသီသွေးတွေ ပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုလာတဲ့အတွက် သားအိမ်ရဲ့နံရံတချို့ကို ခွဲထုတ်ထားရတဲ့သူတွေမှာလည်း ဒါမျိုးကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍များ လုံး လက္ခဏာတွေမပြသလို ကိုယ်တိုင်လည်းမသေချာတော့ရင် သားဥအိမ်အလုပ်လုပ်နေသေးသလားဆိုတာကို သွေးစစ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါထဲ estrogen ပမာဏကိုပါတိုင်းတာပြီး အရိုးပွရောဂါဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နုန်းဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတာပါ အကြမ်းဖျင်းတွက်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ်။
၁၀ – ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသခြင်းက သွေးဆုံးခြင်းလက္ခဏာတွေကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်ရာမှာ စိတ်ချရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသလား ?
FDA ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးတွေဟာဆိုရင် hot flashes နဲ့ အရိုးတွေပြုန်းတီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ hot flashes ဘယ်လောက်ပြင်းသလဲ၊ အရိုးတွေဘယ်လောက်ထိတိုက်စားခံထားရသလဲ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တော့ အကျိုးအပြစ်တွေကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဟော်မုန်းကုထုံးတွေက လူတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အသုံးမပြုမီမှာ ဆရာဝန်နဲ့အတူ အရင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
၁၁ – ဟော်မုန်းကုထုံးမဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ရော သွေးဆုံးခြင်းလက္ခဏာတွေကို သက်သာအောင်ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါသလား ?
ဟော်မုန်းကုထုံးတွေက လူတိုင်းနဲ့မတည့်ပါဘူး။ ဟော်မုန်းကုထုံးအသုံးမပြုဘဲ သွေဆုံးချိန်လက္ခဏာတွေ သက်သာအောင်လည်း ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံတချို့ကို ပြောင်းလဲပြစ်ခြင်းဟာလည်း ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
– နေထိုင်ရာ အခန်းတွင်း အပူချိန်ကိုလျော့နည်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
– လက္ခဏာတွေကိုပိုဆိုးလာအောင် လှုံဆော်မယ့် အစားအစာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း
– လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသောနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ herbal medicine များအသုံးပြုခြင်း၊ မိမိစိတ်ပျော်ရွှင်ရာနည်းလမ်းများ (သီချင်းနားထောင်ခြင်း တရားထိုင်ခြင်း စသည်)၊ အပ်စိုက်ကုသခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသော ဆေးဝါးအနည်းငယ်မှီဝဲခြင်းနှင့် အခြားသောသင့်လျော်သည့်ဆေးဝါးများသုံးစွဲပေးခြင်းတို့ကလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရာသီသွေးကုန်ဆုံးခြင်းဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ မဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့ oestrogen နဲ့ progesterone တွေကျဆင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အရိုးပွခြင်းနဲ့ တချို့သော နှလုံးရောဂါများကို ဖြစ်ဖို့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းတွေပိုများလာတာကို ကြုံရမှာပါ။
အစားအသောက် ရွေးချယ်စားသုံးခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်းတို့က ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ရာသီသွေးဆုံးလက္ခဏာတွေ ပိုပြီးဆိုးရွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့သွားရောက်တိုင်ပင်ပြီး သင့်တော်တဲ့ကုသမှုတွေခံယူနိုင်ပါတယ်။